Mobile-Ready အီးမေးလ်ဖန်တီးရန်အချက်အလက်များ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 20, 2012 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2012 Lavon ဘုရားကျောင်း
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောအီးမေးလ်တစ်ခုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုမစတင်မှီ“ သင့်အီးမေးလ်ကိုကြည့်ရှုရန်သင့်လက်ခံသူများကဘာတွေလဲ” ဟုသင့်ကိုယ်သင်မေးသင့်သည်။ မိုဘိုင်းလ်ပိုကောင်းတဲ့အီးမေးလ်တစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်၊ ထိုအခါ ၎င်းကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုစတင်စဉ်းစားရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
လက်ကိုင်ဖုန်းများသည်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းများကိုအက္ခရာ ၁၅ လုံးခန့်ဖြတ်တောက်နိုင်သည် သင်သည်စာဖတ်သူများအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာလိုင်းများကိုဖန်တီးသောအခါဤအချက်ကိုသေချာပေါက်သတိပြုပါ။
အီးမေးလ်များအပြင်အဆင်များနှင့်ဆင်တူသည်။ မိုဘိုင်းအီးမေးလ်အပြင်အဆင်သည်ရှုထောင့်မှချိတ်ဆက်ရန်အထိကွဲပြားခြားနားသောအရာများပါဝင်သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ကမျက်နှာပြင်ကပိုသေးငယ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုဖန်တီးတဲ့အခါစဉ်းစားပါ။ ရုပ်ပုံများသည်လက်ကိုင်ဖုန်းများအားလုံးတွင်စနစ်တကျမှန်မမှန်စစ်ဆေးပါ။ မရရှိလျှင်စာသားများထပ်ထည့်သင့်သည်။ ပြီးတော့၊ သတိရပါ၊ ဖုန်းသေးသေးလေးပေါ်ရှိလက်ချောင်းများအဆီ၊ ခလုတ်များနှင့်လင့်ခ်များကိုဖန်တီးသည့်အခါ!
3. စမ်းသပ်ခြင်း, စမ်းသပ်, စမ်းသပ်!
အကောင်းဆုံးသောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုဆွေးနွေးခြင်းအားဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်မိုဘိုင်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သောအီးမေးလ်များကိုဖန်တီးပါကဤအလေ့အကျင့်ကောင်းကိုဆက်လုပ်လိုကြသည်။ စာရင်းပေးသွင်းသူများထံမပို့မီ၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာပြန်ဆိုနိုင်ရန်သေချာစေရန်သင်၏အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးပြီးကြောင်းသေချာပါစေ။
20:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 17
စမတ်ဖုန်းတော်တော်များများဟာမှန်ကန်စွာ format ချထားသရွေ့အကြောင်းအရာများကိုချုံ့ချဲ့ပစ်လိမ့်မည်ကိုသတိပြုမိသည်။ အီးမေးလ်တွင်မူ၊ ၎င်းသည်ဇယားများနှင့်ကော်လံများဖြင့်ပြီးမြောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သင်၏အီးမေးလ်၏ကိုယ်ထည်သည်ကော်လံတစ်ခုနှင့်ဘေးချင်းဘားတစ်ခုထဲတွင်ရှိပါကသင်၏မျက်နှာပြင်ကိုချဲ့ရန်သင်၏ဖန်သားပြင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါဆိုပါကကောင်းမွန်စွာချဲ့ရန်ပုံရသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအချို့အီးမေးလ်များတွင်စာလုံးသေးသေးလေးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မကူညီနိုင်ပါ။ သင်၏ဖောင့်များကိုကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားနှင့်သင့်စာမျက်နှာကိုအီးမေးလ်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အတွက် format လုပ်ပါ။
20:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 20
တယ်လီဖုန်းဖြင့်အီးမေးလ်ကိုဖတ်ရန်သို့မဟုတ်ဖြေကြားရန်အားမပေးခဲ့သူ - some အချို့သောအရာများသည်ကွန်ပျူတာကဲ့သို့သောအရာများသည်အီးမေးလ်အစားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထိုက်သည်ဟူသောအတွေးဖြစ်သည်။
20:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 24
23:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 21 တွင်
၎င်းသည်ဖန်တီးမှုဘက်တွင်သေချာပေါက်မရှိနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တိုင်းတာရန်၊ တိုင်းတာရန်၊ တိုင်းတာရန်ထည့်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုတိုင်းတာပါ။ A / B သည်၎င်းတို့မက်ထရစ်များပြောနေသည့်အရာနှင့်အတူအီးမေးလ်တစ်ခုစီကိုသူတို့မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်သူတို့ကိုစစ်ဆေးရန်စစ်ဆေးပါ။
ဧပြီ 13, 2012 မှာ 6: 01 AM
ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမှာ XmailWrite ဟုခေါ်သော (အခမဲ့) ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါမကြာသေးမီကသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်ကျဆင်းသွားနိုင်သည့်အခြားသူများကိုအကျိုးပြုနိုင်သည့်ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ပို့စ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဗွီဒီယို / ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုလင့်ခ်လုပ်ပါ။ http://www.multiplestreammktg.com/blog/your-new-secret-weapon-for-writing-e-mails/